Hain-trano teny Anosibe :: Nitsinjo an'ireo tra-boina ny kandidà Andriantsitohaina Naina • AoRaha
Hain-trano teny Anosibe Nitsinjo an’ireo tra-boina ny kandidà Andriantsitohaina Naina
Tonga nidodododo nitondra fanampiana ho an’ireo tra-boina vokatry ny hain-trano nitranga teny Anosibe, tamin’ny zoma lasa teo, ny kandidà amin’ny fifidianana ben’ny tanàna eto Antananarivo renivohitra, Andrian­tsitohaina Naina.
Trano fito amby telopolo tafo no lasibatry ny afo, tamin’ io fotoana io. Manoloana izany, dia nanome tafo, borety, angady sy vary ary ireny karazana »paty » ireny ny kandidà laharana fahefatra ao anatin’ny biletà tokana hampiasaina amin’io fifi­dianana io.
Sady nitondra izay voa­tsirambin’ny tanana no nanka­hery an’ireo fianakaviana tra-boina ireo Andriantsitohaina Naina. Nanampy azy ihany koa ny vadiny, izay nitsidika ny akany “Iavosoa” misy azy ireo. Naneho fisaorana noho izao fihetsika nasehon’ny kandidà mivady izao ireo mponina teny an-toerana. Nangataka ny mba hanomezana azy ireo amin’ ny fampitaovana an’ireo mpianatra ihany koa ireto tra-boina ireto.